Inkonzo yokuhlola itshe eku-inthanethi - imiphumela yamahora angama-48 - i-10 $ US ngetshe ngalinye
Sinikeza insiza yokuhlola amatshe akwe-inthanethi
Intengo yesevisi yokuhlola itshe online: kuphela yi-10 $ US ngetshe / Umphumela emahoreni angama-48.
* Ukukhokha nganoma iyiphi imali.
Kususelwa ezithombeni zamatshe namavidiyo anikezwe. Sizohlaziya izakhiwo ezahlukahlukene zetshe lakho:
Insiza yokuhlola itshe eku-inthanethi. Isibonelo somphumela nge-imeyili:
ucwebezela ngendlela ekhangayo
Ukukhishwa ukukhanya. (umlilo)
Isakhiwo se-Crystal (ngamatshe anokhahlo, aqinile)
Ngemuva kokuhlola zonke lezi zakhiwo, uzothola imiphumela yakho ngokunembe ngangokunokwenzeka.
Isibonelo, uma umphumela “Glass", Kepha asikwazi ukusho ukuthi ngabe kunjalo ingilazi yemvelo or ingilazi eyenziwe. Sizokunikeza izimpendulo zombili, ngamaphesenti okungenzeka.
Ingilazi. Okungaba khona: 100%
Ingilazi eyenziwe umuntu: i-90% kungenzeka
Ingilazi Yemvelo (i-Obsidian): kungenzeka okungu-10%
Uzothola impendulo yakho nge-imeyili kungakapheli amahora angama-48 ukhokhile.
Akukho mininingwane eyengeziwe noma ethungwayo ezonikezwa.
Kungcono ikhwalithi yezithombe namavidiyo wakho, okuzocaciswa kwethu ukuthi kuzoba yini.
Ungathumela kanjani izithombe namavidiyo?
Ngemuva kokuthola inkokhelo yakho, uzothola i-imeyili yokuqinisekisa enezinketho ezahlukene zokuthumela amafayela akho: I-imeyili, i-Messenger, WeChat, WhatsApp, Line, Viber, njll.
Uzithola kanjani izithombe zethu?
Lapho uthumela amafayela, kuzodingeka futhi uthumele inombolo yakho ye-invoice, ukuze sikwazi ukubona kahle amafayela akho.
Nginamatje amaningana okuhlola, yini okufanele ngiyenze?
Ungakhetha inombolo yamatshe ukuze uyihlole, ungakhokha yonke into ngasikhathi sinye ngebhili elilodwa nje.
Ngikuthumele izithombe namavidiyo kodwa angikayitholi impendulo?
Mhlawumbe ukhohliwe ukusho inombolo ye-invoyisi noma mhlawumbe awukakhokhi okwamanje.
Ngingalazi izwe avelaphi naleli tshe?
Cha, akunakwenzeka ukwazi imvelaphi yendawo eyitshe ngesithombe noma ngevidiyo.
Ezimweni eziningi, akunakwenzeka ukuthi kuhlolwe itshe ngokunembile ngaphandle kokukwazi ukwenza izivivinyo ngamathuluzi.
Kuyiqiniso, akunakwenzeka ukuhlola ubukhulu, inkomba yokuphinda usebenze, ukwakheka kwamakhemikhali. Akunakwenzeka futhi ukuthi uhlaziye ama-inclusions ngaphansi kwesibonakhulu, njll.
Lonke lolo lwazi lubalulekile ekuhlaziyweni okunembile. Impendulo yethu ngakho-ke izoba kaningi kakhulu, ngoba ukuhlolwa okubukwayo kusitshela kuphela imininingwane ethile ezimeni eziningi enganele.
Umphumela ngeke ube isitifiketi esisemthethweni. Kuzoba ngumbono nje wesazi sokufunda iziqu ze-gemologist.
Akunakuphika ukuthi noma yikuphi ukulinganisa lokhu kungasetshenziswa njengesitifiketi.
Ngeke sibe nesibopho sokuthengiswa noma ukuthengwa kwetshe.
Njengososayensi. Asinikezi insiza yokuhlola amanani. Intengo incike emakethe, engahlangene nesayensi ye-gemological.
Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa ngemuva kokuthola impendulo. Impela, noma uphoxekile ngempendulo. Udokotela we-gemologist uchithe isikhathi esifanayo esebenza etsheni noma ngabe liyinkohliso noma itshe langempela.
Oda insizakalo yokuhlola itshe online: 10 $ US itshe ngalinye
Uma ufuna ukukhuluma nothisha we-gemology. Siphinde futhi sinikeze insiza yokubonisana online nge-videoconference, ngokuqokwa, ukuqala ngo-30 US $ ngehora. Kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu. 8 ekuseni kuze kube ngu-6pm. Indawo yesikhathi seCambodia / Thailand (UTC + 7)
Bhuka insiza yokubonisana nge-gemology online: 30 $ US ngehora